Mj Rodriguez ajoina Maya Rudolph weNew Comedy Series | Ndinobva mac
Michaela Jae, anozivikanwawo saMJ Rodríguez, anozivikanwa nekupa mubairo-kuhwina "Pose" yeNetflix akasaina as-yet isina zita Apple TV + comedy akateedzana naMaya Rudolph. Sezvakataurwa nepepanhau rakasarudzika Deadline, Mj Rodríguez acharidza naRudolph kwehafu yeawa mutambo yakagadzirwa naAlan Yang naMat Hubbard.
Apple inoenderera kuburitsa zvemukati. Izvi zviri kutanga kuita zvakakomba, tinoziva kuti kuchine nzira refu yekufamba, asi ipapo izvo zvirimo zvaunogadzira zvitsva uye, sezvatinogara tichitaura, zvemhando yepamusoro. Unogona kuzvida zvakanyanya kana zvishoma, asi chatiri kujekesa ndechekuti iri kuzvisimbisa pachayo nezvigadzirwa zvitsva, chimwe chinhu chinokosheswa. Iyo yekupedzisira inoita kunge iri komesi inotarisa vaviri vakanaka vatambi vemitambo.
Rudolph anotamba Molly, mukadzi ane hupenyu hunoratidzika kunge hwakakwana akatora shanduko huru mushure mekunge murume wake amusiira asina "chimwezve" chinopfuura $ 87.000 bhiriyoni. Rodríguez anotora chinzvimbo chaSofía, director anoshanda nesimba wesangano risingabatsiri rakapihwa mari naMolly. Isu tinoziva kuti Apple yatove nekodzero kumatambo munaKurume. Nekudaro, isu hatisati taziva chero chinhu nezve inogona kuburitswa zuva kana zvirinani izvozvi, iyo inogona kutanga zuva rekugadzira
Rodríguez mu2019 akave wekutanga trans mukadzi kuhwina mibairo yeakanakisa terevhizheni mutambi mu Mifananidzo Mifananidzo. Pamberi pa "Pose," Rodriguez akatamba chinzvimbo mu "Mukoti Jackie" na "Luke Cage," uye akaonekwa mune yakazvimirira firimu "Saturday Church."
Iyo Apple TV + inosangana naRudolph naRodriguez ndeye yakanyorwa, yakagadzirwa uye yakagadzirwa naYang naHubbard, vese vari vaviri Emmy mubairo vakunda. Yang akashanda pa "Master of None" uye Apple TV + yakasarudzika "Little America." Ipo Hubbard akanyora zvikamu zve "30 Rock", "Parks and Recreation" uye "Nokusingaperi".
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple TV » Mj Rodriguez Anodzidzisa NaMaya Rudolph YeNew Comedy Series
Iko kuyedza kunoratidza kuti AirTag iri pamusoro peTiles